Maalin: Janaayo 22, 2019
M.Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, wuxuu sheegay in garoonka diyaaradaha Istanbul uu yahay midka ugu fiican, mala-awaalka iyo fikirka weyn. Waxaan rajeynayaa in la soo gabagabeyn doono bisha Maarso. ” Wasiir Turhan, [More ...]
Wax soo saarka Asphalt Emulsion, Cirifka dusha iyo Emulsion ee loo isticmaalo Rize-Artvin Gobollada
Soosaarista Emulsion Asphalt (CRS-10) ee loogu talagay in lagu isticmaalo Wadooyinka Gobolka iyo Gobollada Rize - Gobollada Artvin, 2 Agaasime Gobol ee Wadooyinka Waaweyn [More ...]
Dayeysu-Başköy Road, Shaqooyinka Dunida, Shaqada Farshaxanka iyo Waxyaabaha Kala Duwan
Wadada Güneysu-Başköy Km: Inta u dhaxaysa 0 + 000-10 + 200 iyo Merkez Mah Wadada Km: 0 + 000-1 + 121,47 Inta u dhaxaysa Dhulgariirka, Dhismaha Farshaxanka, Shaqooyinka Superstructure iyo Shaqooyin Kala Duwan (iyidereÇayeli) Wadada Ayr-Güneysu County Km : Inta u dhaxaysa 0 + 000-9 + 066,44 [More ...]
Diyaarinta Mashaariicda Kala Duwan ee Mashruuca Injineerka [More ...]
Xarunta Wicitaanka Polatlı-Konya ayaa lagu xiray qaybta qaybta, Adeegga Dakhliga ee Isgaarsiinta Telefishinka
Polatlı-konya Line Goynta Yht Calaamaynta, Isgaarsiinta, Gsm-r iyo Nidaamyada Xarunta Xakamaynta ee Ankara Ctc iyo Nidaamyada Dayactirka Muddada 3 Sanadka iyo Adeegyada Dayactirka [More ...]
Nidaamka Tareenka Varsak-Otogar wuxuu ka shaqeeyaa Aerial View
Nidaamka tareenka wuxuu ka shaqeynayaa dhisme u dhexeeya Varsak-Otogar oo laga arkayay hawada. Diyaaradda nooca loo yaqaan 'drone' waxay muujineysaa in biraha iyo xargaha loo yaqaan 'catenary Khadadka' ay ku rakiban yihiin saldhigga basaska. Tuneel dhulka hoostiisa ah oo mashquul ah iyo dhismaha saldhigga [More ...]
Qeybta Adeegyada Gaadiidka Dawlada Hoose ee Magaalada Malatya ee udhaxeysa Karakaya Dam Lake xilliyada adeega doonta ayaa la badalay. Xeerar cusub ka dib isbeddelada lagu sameeyo adeegyada doonta iyo waqtiyada [More ...]
"Kaalay, caruurtu waxay tagaan buurta Ergan"
Dawlada Hoose ee Erzincan waxay furtay koorsooyin baraf baraf ah iyo barafka barafka loogu talagalay carruurta da'da da '10-17. Codsiyada waxaa loo sameyn doonaa miiska Cad ee Degmada Erzincan inta u dhaxaysa 21-23 Janaayo koorsada ayaa sii socon doonta inta lagu jiro fasaxa semesterka. Laga soo bilaabo heerka gelitaanka [More ...]
Dawlada hoose ee degmada Erzincan waxay soo qabanqaabisay habeen dhiirigelin anshaxeed darawallada basaska ee magaalada. Barnaamijka waxaa abaabulay Duqa Magaalada Erzincan Cemalettin Cemalettin Başsoy, Kuxigeenka Duqa Magaalada Halit Mutlu, Erzincan Magaalada SS23 No. [More ...]
Hay'adda Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka Devlet DHMİ kapsamında iyada oo ku xaddidan sharciga Agaasinka Guud ee Sharciga Iibsiga Dadweynaha No. 4734 “Nidaamka Iibsiga Bilaashka ah ee ugu sareeya oo ah 3 kun 619 shaqaale ayaa la shaqaaleysiin doonaa. Shaqaalaysiinta shaqaalaha DHMI [More ...]
Shaqaalaha 9 IZBAN ee lagu soo abaabulay Demiryol-Is, oo xuquuqdooda shaqo joojinta laga qaaday wareegtada madaxweynaha ee Janaayo, waxay saxiixeen heshiiska gorgortanka wadajirka ah ee uu soo rogay loo shaqeeyuhu. Bayaanka ay soo saartay maamulka İZBAN, ‘Saxiix, boqolkiiba 26 kaas oo ah soo jeedintii ugu dambeysay ee İZBAN [More ...]
Go'aanka ay qaadatay Isuduwaha Isuduwaha Gaadiidka Eskişehir (UKOME), khadka minibus ee Mavi 23 wuxuu bilaabayaa inuu u adeego fududeynta gaadiidka muwaadiniinta ku nool iyo agagaarka Batıkent Isbitaalka Magaalada. Muwaadiniinta ku nool xaafada Batıkent [More ...]
Is-gooyadan ayaa nolosheeda siin doonta Alasehir
Dowladda Hoose ee Manisa ee Magaalada Alaşehir, dhismaha wadada weyn ee Izmir-Denizli ayaa biloowday dhawaanahan (qeybta hoose) qeybta isgoyska ee isgoyska wadada isgoyska ayaa kashaqeynaya si aan kala go 'lahayn. Alaşehir kadib daraasadihii la sameeyay [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaaladu waxay sii wadeysaa dib u cusbooneysiinta iyo badalida wadooyinka goobaha muhiimka ah ee Mersin, Wadada Yaşar Doğu ee degmada Mezitli iyo wadooyinka laxiriira kaabayaasha iyo shaqooyinka rajada. [More ...]